Obbo Dammaqaan hoji raawwachiisaa olaanaa Saaliinii waliin Roomitti mari’atan – Fana Broadcasting Corporate
Obbo Dammaqaan hoji raawwachiisaa olaanaa Saaliinii waliin Roomitti mari’atan
Finfinnee, Onkololeessa 7, 2012 (FBC) – Itti aanaan muummee ministiraa obbo Dammaqaa Makoonnan hoji raawwachiisaa olaanaa Dhaabbata Saaliinii miistar Saaliinii Imparjiilii waliin magaalaa Roomitti mari’atan.
Turmaata isaanitiin adeemsa ijaarsa Hidha Haaromsaarratti mari’ataniiru.
Karoora mootummaan baasen ijaarsi proojaktichaa kan itti fufu ta’uu obbo Dammaqaan ibsaniiru.
Hoji raawwachiisaa olaanaa Dhaabbata Saaliinii miistar Saaliinii Imparjiiliin gama isaanitiin dhaabbanni isaanii, itti gaafatama mootummaa fi ummanni Ityoophiyaa itti laate kan ba’atu ta’uu ibsaniiru.
Sadarkaa qulqullinaa fi yeroo qabameefin akka xumuramutti hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru.
Miseensonni WBO hidhannoo hiikkatanii leenjiirra turan 256 ebbifaman
Rakkoo nageenyatiin kurmaana jalqabaatti invastimantiirraa Doolaarri miiliyoonni…
Kookeeyiniin kiiloo giraamni 47 too’annoo jala oole
Beekamtii waajjirichaatin ala qaamolee socho’an irraa of eeggannoon taasifamu…
Yuunvarsiitiwwaan gara tasgabbiitti kan hingalle yoo ta’e…
Namootni Feesbuukii fi Yuutiiyuubiin hordoftoota baay’ee…
ABO’n Boordii Filannoo Biyyoolessaa Ityoophiyaa irraa…